HUAWEI Mate 10 Pro | Android Phone | HUAWEI Myanmar
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး AI နည်းပညာသုံး KIRIN PROCESSOR
နည်းပညာသစ်ဖြစ်တဲ့ GPU Turbo ရဲ့ ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့အတူ Image Processing Speed က သိသိသာသာလျင်မြန်လာတာကြောင့် သေသပ်ချောမွေ့ပြီး ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ မြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံတွေရရှိစေမှာပါ။
HDR 10 နည်းပညာကြောင့် လက်တွေ့ဘဝမှာ မြင်တွေ့နေရသလိုမျိုး ခံစားမှုအသစ်၊ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ရရှိစေမှာပါ။
၆ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်၊ 18:9 display ratio, ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဘေးဘောင်အနားသတ်၊ အရောင်အသွေးစုံလင်တောက်ပစေမယ့် HDR 10 နည်းပညာတွေနဲ့ HUAWEI FullView Display
နောက်ဖက်ကင်မရာနှစ်ခုကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးထားတဲ့ လိုင်းအစင်းလေးတွေကြောင့် ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ သေသပ်လှပမှုကို ပေါ်လွင်လာစေပါတယ်။ မှန်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ နောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ကွေးကြောင့်လည်း အကောင်းဆုံးခံစားမှုကိုရရှိစေမှာပါ။
သေသပ်လှပတဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအတွက် HUAWEI Mate 10 Pro ရဲ့ ရှေ့နဲ့နောက်ကို မာကျောတဲ့မှန်နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ မှန်ရဲ့မာကျောမှုအတွက်လည်း ပုံမဖော်ခင် ၇၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အပူပေးပြီး ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒီလိုခေတ်မှီနည်းပညာတွေနဲ့ အသုံးပြုဖန်တီးထားတာကြောင့် သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စတိုင်ကို ရရှိစေမှာပါ။
IP67 ရှိတဲ့ ဖုန်၊ ရေစိုခံနိုင်မှု။ ကြုံလာသမျှကိစ္စတိုင်းကို HUAWEI Mate 10 Pro နဲ့ တူတူဖြတ်သန်းနိုင်ပြီလေ။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး AI နည်းပညာသုံး KIRIN PROCESSOR ကြောင့် လျင်မြန်မှု၊ မာကျောမှုတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရရှိစေမှာပါ။
KIRIN 970 က လျင်မြန်မှုနဲ့ တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကို အကောင်းဆုံးမောင်းနှင်ပေးမှာဖြစ်သလို AI နည်းပညာရဲ့ တွက်ချက်မှုနဲ့ NPU (Neural-Network Processing Unit) စနစ်ကြောင့်လည်း လွယ်ကူသက်သာအဆင်ပြေစေမှာပါ။
HUAWEI Mate 10 Pro က Smart ဖြစ်တယ်။ မြန်တယ်။ ကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ပြင်ပကမ္ဘာရဲ့အခြေအနေတွေကို နားလည်နိုင်သလို လျင်လျင်မြန်မြန်တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Cutting-edge 10nm နည်းပညာနဲ့ 8-core CPU, 12-core GPU တို့ကြောင့် HUAWEI Mate 10 Pro က ပါဝါမစားဘဲ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လျင်မြန်မှုရရှိစေမှာပါ။
NPU ဆိုတာကတော့ ခေတ်ရှေ့ပြေးနည်းပညာတစ်ခုပါပဲ။ AI နည်းပညာနဲ့ တွက်ချက်ပေးပြီး လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို အဆ ၅၀ အထိ အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်သလို စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ၂၅ ဆ လောက်အထိ မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒီ NPU က ပုံမှန် Cloud အခြေပြုဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမှာလည်း လုံးဝအသေအချာပါပဲ။
HUAWEI Mate 10 Pro ကို ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲ၊ ဘာတွေသုံးလဲဆိုတာကို Kirin 970 က နားလည်နိုင်အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပိုမိုသက်သာပြီးအဆင်ပြေစေအောင် ကြိုတင်တွက်ဆ ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်သလို အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာ ထိန်းထားပေးမှာပါ။
Smart Battery Management နဲ့ တစ်နေ့လုံးအားရပါးရအဝသုံးနိုင်မှာပါ။
*Based on results from HUAWEI lab tests. Lab test environment: temperature at 25 ℃, relative humidity: 45% to 80%. By using HUAWEI SuperCharge charger, the phone was charged from 1% power in 4G network standby status.
4000 mAh ရှိတဲ့ ဘက်ထရီပမာဏနဲ့ အသုံးပြုသူရဲ့ အလေ့အထကို လေ့လာပြီး အကောင်းဆုံးစီစဉ်ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် Smart Battery Management တို့ကြောင့် မလိုအပ်ဘဲအားကုန်တာတွေကိုလျော့ချပေးပြီး ဘက်ထရီပမာဏကို အမြင့်ဆုံးထိတိုးမြှင့်ပေးနိုင်မှာပါ။
HUAWEI ရဲ့ SuperCharge နည်းပညာက မိနစ် (၂၀) အားသွင်းထားပြီး တစ်ရက်လုံးအသုံးခံနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ချရမှုအတွက်လည်း TÜV Rheinland က ထောက်ခံပေးထားပါသေးတယ်။
Based on results from HUAWEI lab tests. Lab test environment: temperature at 25 ℃, relative humidity: 45% to 80%. By using HUAWEI SuperCharge charger, the phone was charged from 1% power in 4G network standby status.
HUAWEI ရဲ့ AI နည်းပညာနဲ့ Leica ကင်မရာအသစ်နှစ်ခုရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတွေကိုရရှိစေမှာပါ။
f/1.6 ရှိတဲ့ Aperture နဲ့ Leica
f/1.6 ရှိတဲ့ Aperture နဲ့ Leica ကင်မရာအသစ်နှစ်ခု တို့ကြောင့် လှပသေသပ်တဲ့ Depth of Field ပုံတွေ၊ ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ low-light ပုံတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို ရိုက်ကူးရာမှာ ဝေဝေဝါးဝါးမဖြစ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အလွယ်တကူရရှိစေမှာပါ။ 20MP ရှိတဲ့ Monochrome Sensor နဲ့ 12MP ရှိတဲ့ RGB Sensor တို့ကိုမှ Optical Image Stabilization ပါဝင်တော့ အလင်းရောင်များများဖမ်းယူနိုင်ပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ရရှိစေမှာပါ။
AI နည်းပညာရဲ့ သိရှိနားလည်နိုင်စွမ်း
နည်းပညာမြင့်ဖန်တီးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုစနစ်ကြောင့် HUAWEI Mate 10 Pro က ပုံရိပ်ဖမ်းမယ့်အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကို သိရှိနားလည်နိုင်ပြီး အရောင်အသွေး၊ အလင်းအမှောင်တွေ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးနိုင်တာကြောင့် သေသပ်ကောင်းမွန်ပြီး တိကျပြတ်သားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိစေမှာပါ။
အမိုက်စား BOKEH Effect နဲ့ အကောင်းဆုံး PORTRAIT
AI နည်းပညာရဲ့ သင်ယူနိုင်စွမ်း၊ လေ့လာနိုင်စွမ်းတို့ကြောင့် HUAWEI Mate 10 Pro နဲ့ ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် Professional ဆန်တဲ့ BOKEH Effect တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတွေ၊ Selfie တွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
ပိုပြီးလျင်မြန်တဲ့ Download တွေနဲ့ တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်တဲ့ လိုင်းဆွဲအား
မြန်လည်းမြန်တယ်၊ ငြိမ်လည်းငြိမ်တဲ့ လိုင်းဆွဲအား
နည်းပညာမြင့်တဲ့ လိုင်းဆွဲအားရှာဖွေချိတ်ဆက်နိုင်မှုတွေကြောင့် အဝေးကြီးကိုခရီးသွားနေရင်တောင် HUAWEI Mate 10 Pro က အကောင်းဆုံးလိုင်းဆွဲအားရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ။
တစ်ဖက်ကတိုးတိုးလေးပြောရင်တောင် HUAWEI Mate 10 Pro မှာ ကောင်းကောင်းကြားရပါတယ်။ HUAWEI Mate 10 Pro မှာပါတဲ့ AI နည်းပညာက ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာတိုးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆူညံနေတဲ့နေရာက ဖုန်းခေါ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးနဲ့ အကြည်လင်ဆုံးကြားရအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာပြန်ရာမှာလည်း AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့အတွက် စာတွေ၊ အသံတွေ၊ ပုံတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုထားတဲ့စာသားတွေကို ဘာသာပေါင်း (၅၀) ကျော်အထိ ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ HUAWEI Mate 10 Pro ရဲ့ AI နည်းပညာကြောင့် ပုံတွေ၊ စာတွေကို ဘာသာပြန်ရာမှာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ လျင်မြန်မှုမျိုးရရှိစေမှာပါ။
User Interface အသစ်
အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေကြောင့် HUAWEI Mate 10 Pro ရဲ့ UI က မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေခံစားရမှာပါ။ NPU မှစတင်လိုက်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေကြောင့် Developer တွေ နည်းပညာမြင့် App တွေ ဖန်တီးရာမှာ AI အဓိကထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mouse တွေ၊ Keyboard တွေ မသယ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ HUAWEI Mate 10 Pro ရဲ့မျက်နှာပြင်ကို Touchpad တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
Wireless Mouse တွေ၊ Keyboard တွေအသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူတာတစ်လုံးလိုခံစားရစေဖို့လည်း HUAWEI Mate 10 Pro က အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့မော်နီတာတွေမှာ HUAWEI Mate 10 Pro နဲ့ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပြီး Smartphone တစ်ခုရဲ့ မျက်နှာပြင်အဖြစ်တိုးချဲ့လိုက်ပါ။ Personal နဲ့ဆိုင်တဲ့ Notification တွေ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ၊ Messages တွေကိုတော့ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပဲ မြင်နေရမှာပါ။
Navigation ခလုတ်တွေကို ဖျောက်ပြီး Navigation Dock တစ်ခုတည်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရပါတယ်။
App နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်းသုံးဖို့လည်း လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
HUAWEI Mate 10 Pro ကို Multi Column ပုံစံပြောင်းသုံးလို့လည်းရပါတယ်။
*အထက်ပါ စာမျက်နှာများရှိ ထုတ်ကုန်၏ ပုံများနှင့် ပြသထားသည့်အကြောင်းအရာတို့သည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ တကယ့်ထုတ်ကုန်၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ (ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရောင်နှင့် အရွယ်အစား အပါအဝင် ကန့်သတ်မထားပါ)၊ အမှန်တကယ် ပြသသည့်အကြောင်းအရာများ (နောက်ခံပုံများ၊ UI နှင့် အိုင်ကွန်များ အပါအဝင် ကန့်သတ်မထားပါ) သည် ကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်သည်။
**အထက်ဖော်ပြပါ စာမျက်နှာများရှိ ဒေတာအားလုံးသည် အထူးအခြေအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး HUAWEI ၏ ကုမ္ပဏီတွင်းစမ်းသပ်ခန်းများမှ ရယူထားသော သဘောတရားအရ တန်ဖိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သိရှိရန် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်များကို ရည်ညွှန်းပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းများ၊ အသုံးချမှု အခြေအနေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ ကွဲပြားသောကြောင့် တကယ့်ဒေတာများသည်လည်း ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ ဒေတာအားလုံးသည် လက်တွေ့အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်သည်။
***ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်နံပါတ်များ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှု အချက်များပါဝင်သည့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် မှန်ကန်တိကျသည့် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များ၊ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် HUAWEI သည် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်စာမျက်နှာများရှိ ဖော်ပြရေးသားချက်များနှင့် ပုံများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့် တကယ့်ထုတ်ကုန်၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ရေးသား ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။